Usoro mkpuchi PVD na mmepe teknụzụ metụtara ya
PVD bụ ndebiri nke ihe nrụpụta anụ ahụ (Nkwupụta vepo anụ ahụ) na Bekee. Ọ na-ezo aka n'iji obere voltaji, teknụzụ ịgbapụta arc dị elu n'okpuru ọnọdụ agụụ, na iji mgbapụta gas emeEbumnucheWepu ma mebie ionize ihe ikuku na gas, ma jiri osooso nke ọkụ eletriki tinye ihe anwụrụ na ngwaahịa mmeghachi omume ya na ngwa ọrụ.
Teknụzụ PVD pụtara na ngwụsị 1970, na ihe nkiri a kwadebere nwere uru nke ekweghị ekwe, ọnụọgụ obere esemokwu, ezigbo nguzogide na nkwụsi ike kemịkal, wdg. Ngwa izizi gara nke ọma n'ọhịa nke ngwa ịcha nchara dị ngwa dọtara nnukwu nlebara anya site na ụlọ ọrụ nrụpụta gburugburu ụwa. Mgbe ị na-emepe akụrụngwa mkpuchi dị elu na arụmọrụ dị elu, ha emewokwa mkpuchi mkpuchi miri emi karịa na ngwa carbide ciment na ngwa ịkpụ seramiiki. Nnyocha Ngwa Layer.
E jiri ya tụnyere usoro CVD,Usoro PVDỌnọdụ nhazi dị ala, na ọ nweghị mmetụta na ike ehulata nke ihe akụrụngwa mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru 600 ℃; ọnọdụ nrụgide nke ime ihe nkiri ahụ bụ nrụgide mkpakọ, nke dabara adaba maka mkpuchi nke nkenke carbide na ngwaọrụ dị mgbagwoju anya; Usoro PVD enweghị mmetụta ọjọọ na gburugburu ebe obibi, ma kwekọọ na ntụzịaka mmepe nke nrụpụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọgbara ọhụrụ ugbu a, Ejiri teknụzụ mkpuchi PVD n'ọtụtụ ebe na ọgwụgwọ mkpuchi nke mills carbide ciment, u, nzọụkwụ u, mmanụ oghere u, reamers, taps, indexable egwe ọka inserts, ngwaọrụ pụrụ iche, ngwaọrụ ịgbado ọkụ, wdg.
Teknụzụ PVD ọ bụghị naanị na -eme ka ike njikọta dị n'etiti ihe nkiri na ihe matriks ngwaọrụ, mana ngwongwo mkpuchi ahụ amalitekwala site na TiN ruo TiC, TiCN, Zrn, KRN, MoS2, TiAlN, TiAlCN, TiN-AlN, CNx, DLC, na ta-C. mkpuchi.
Maka sputtering lekwasịrị, họrọ ebumnuche Shaanxi Zhongbeitai!
1.The sputtering akụrụngwa bụ mgbagwoju anya na-achọ a elu-voltaji ngwaọrụ: Ihe chọrọ sekit agbakọbara maka ịdị ọcha nke mgbachapụ anya
1.The sputtering akụrụngwa bụ mgbagwoju anya na-achọ a elu-voltaji ngwaọrụ: Plansee na -ebupụta MoNa sputtering target iji meziwanye arụmọrụ nke sel CIGS